Taratasy misokatra ho an' Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara - Transparency International - Initiative Madagascar
Taratasy misokatra ho an' Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara
Nivoaka ny 11 Desambra 2019 ao amin'ny ,
an’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara
an’ Andriamatoa Minisitry ny Fitsarana
an-dRamatoa Filohan’ny Antenimierampirenena
an’ Andriamatoa Filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana
Mialoha ny zava-drehetra, izahay, mpikatroka ao anatin’ny Fiarahamonimpirenena malagasy manao sonia an’ity fanambarana ity dia mampatsiahy ampanajàna ny tenin' Andriamatoa Filohan'ny Repoblika voarakitra ao anatin’ny Politikampanjakana Ankapobeny (PGE) milaza fa ny "Ny mpitarika rehetra dia tokony ho fitaratra sy modely amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana". Azo antoka fa nisy ny ezaka natao tamin'ny ady amin'ny kolikoly, saingy mbola manahirana ny toe-draharaha ankehitriny, indrindra eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana.
Manamafy ihany koa ny PGE fa “Ilaina sy zava-dehibe ny fitantanana maharitra sy ny fikajiana ny harena voajanahary ". Tsy ho tanteraka kanefa ilay fikasana lehibe hamboly hazo 40 000 hektara isan-taona raha toa ka mbola mandefitra amin’ny asa ratsy ataon’ireo mpanimba ala, izay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoany manokana, ny Fitondrana. Ohatra mivaingana amin’izany ny fanapotehana ny faritra arovana ao Menabe Antimena, izay iampangana ny fandraisan’anjaran’ny solombavambahoakan’ny Distrikan’i Mahabo, Atoa Raveloson Ludovic (na i Leva).
Ireto avy, raha tsiahivina, ny fiampangana an'Andriamatoa Raveloson nitarika ny fampidirana azy tany am-ponja tamin'ny volana Mey 2019: famonoana olona, fitrandrahana sy fampivezivezana tsy ara-dalàna hazo arahana fanararaotam-pahefana. Voasazy indray mandeha higadra 5 taona antranomaizina tao amin’ny ambaratonga voalohany izy noho io fiampangana faharoa io izy.
- Nandritry ny fotoanan’ny fampielezankevitra ho an’ny fifidianana solombavambahoaka tamin’ny 2019 no nivoaka ny didim-pitsarana izany hoe efa tsy depiote intsony izy tamin’izany. Noho izany, tsy afaka ny hiafina velively ao ambadiky ny “immunité parlementaire” Atoa Raveloson.
- Ankoatr’ireo fiampangana esty ambony dia voaroiroy amin’ireto asa ratsy ireto koa Atoa Raveloson: (i) fibaikoana ny fanapahana hazo ao amin’ny faritra arovana Menabe Antimena, sy fanaovana tavy hambolena katsaka ao, (ii) fitrandrahana hazo sarobidy ao sady (iii) fampiasana tsy ara-drariny olona sahirana avy any Atsimon’ny Nosy izay nafindra ao mba ho karamaina farak’izay mora.
- Araka ny loharanom-baovao voamarina, fantatra fa nomena tombony tsy ara-dalàna Atoa Raveloson nandritra ny fitazonana azy tany amin'ny fonjan'i Morondava, ka afaka nampiasa finday hifandraisana amin'ny olona any ivelan’ny fonja.
- Ny asabotsy 30 novambra 2019 dia nisy ny fangatahana nataon'ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostria ao Morondava mba hanaovan’Atoa Raveloson asam-ponja any ivelany na MOP. Olona tokana ihany anefa no nahalala sy nanaiky izany fangatahana izany, dia ny Mpampanoa lalàna lehibe ao Toliara. Raha araky ny vaovao am-pelatananay, sady tsy nampafantarina io raharaha io, na ny Mpampanoa lalàn’ny Repoblika, na ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga voalohany ao Morondava nefa izany no fepetra takian’ny lalàna.
Manoloana izany, mankasitraka ny fandraisan’andraikitry ny minisiteran'ny fitsarana izahay noho ny namerenana indray an’Atoa Raveloson ho ao am-ponjan’i Morondava tamin'ny 2 desambra 2019, taorian'ny tsy fanarahana ny fepetra momba ny fampiharana ny MOP.
Ankoatra ny tranga tsy ara-dalàna nanomezana ny MOP dia tsapanay fa tsy nohajain’ Atoa Raveloson koa ny fepetra tokony ho arahina amin’izany satria hita im-betsaka nivezivezy tamin’ny toerana maro ao amin’ny Faritra Menabe izy ary tamin’ny toeran-kafa ivelan’ny faritra tokony hanaovany ny asam-ponja izy no voasambotra tamin’ny 2 desambra 2019.
Tsipahanay tanteraka ny fihetsik’ireo solombavambahoaka sasany izay nitaky ny famotsorana an’Atoa Raveloson sy niaro azy tsy ho voatsara araky ny lalàna. Fanenjehana sy fanasaziana ireo olo-meloka no andrasanay amin’ny Solombavambahoakan’i Madagasikara sy ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana fa tsy sanatria fanomezana vahana na fiarovana azy ireo.
Noho izany antony rehetra izany dia mangataka aminareo izahay, araka ny fahefana rehetra izay hananareo, mba handà ny fanapahankevitry ny Komity manokan'ny Antenimierampirenena mikasika ny “immunité parlementaire” izay mitaky ny fampiatoana ny famonjana an’Atoa Raveloson. Mahaleo tena ny fitsarana araky ny voalazan’ny Lalàmpanorenana ary tsy maintsy tanterahana ny didiny. Ny famotsorana tsy ara-dalàna an’Atoa Raveloson mantsy dia hanaporofo indray amin’ny olompirenena ny fitohizan’ny tsimatimanota ataon’ireo manampahefana eto Madagasikara.
Hijanona ho mailo hatrany izahay manoloana ny fandrahonana sy fampitahorana atao amin'ny mpiasan'ny minisiteran'ny Fitsarana, ny mpikatroka ao amin'ny fiarahamonimpirenena, ny mpanao gazety isan-tsokajiny ary ireo olona rehetra resy lahatra fa ny fahamarinana no tokony manjaka amin’ity raharaha ity.
Tsindrianay etoana ihany koa ny fisokafanay amin'ny fifanakalozan-kevitra mahomby momba ireo olana manohintohina ny tontolo iainana sy ny fitantanana an'i Madagasikara.
Ny Fikambanan'ny fiarahamonimpirenena manao sonia (araka ny abidia):
Antananarivo, 5 desambra 2019
Collectif des Citoyens et des Associations Citoyennes (CCOC)